Oge Jurassic: njirimara, geology, ihu igwe, flora na fauna | Network Meteorology
N'ime oge Mesozoic enwere oge 3 na-ekewapụta ihe dị iche iche nke akara akara mmalite na njedebe ma na usoro ọmụmụ na usoro ndu. Oge mbu bụ Triassic ma taa anyị ga-elekwasị anya n'oge nke abụọ nke Mesozoic. Ọ bụ ihe gbasara Jurassic. Ọ bụ nkewa nke usoro mbara ala nke malitere ihe dịka 199 nde afọ gara aga wee kwụsị ihe dịka nde 145 afọ gara aga. Dị ka ọ dị n'ọtụtụ oge geologic, ma mmalite ma njedebe oge adịchaghị mma.
N’isiokwu a anyị ga-agwa gị njirimara niile, geology, ihu igwe, ahịhịa na ahịhịa nke Jurassic.
3 Igwe ihu igwe Jurassic
Ọ bụ oge nke ụfọdụ ihe ndị dị mkpa mere na ụwa niile na ọ bụ mgbe Triassic na n'ihu Cretaceous. Aha Jurassic sitere na usoro carbonate sedimentary nke emere na mpaghara Europe nke Jura, nke di na Alps. N'ihi ya aha ya bụ Jurassic. N'ime oge a niile, otu n'ime njirimara bụ isi nke pụtara ìhè bụ nnukwu ọchịchị nke dinosaurs (nke emere ọtụtụ ihe nkiri) na nkewa nke nnukwu kọntinent Pangea na kọntinent nke Laurasia na Gondwana.
Site na akụkụ a na-akpọ Gondawana, Australia dara n'oge Upper Jurassic na mmalite Cretaceous. N'otu ụzọ ahụ, e kewara Laurasia n'ihe anyị maara taa dịka North America na Eurasia, na-ebute ụdị anụmanụ dị iche iche ọhụrụ ka ọnọdụ gburugburu ebe obibi gbanwere maka ha niile.
Ebuputara oge nke ala ugbua n’ime ala, etiti na elu. Ndị a bụ oge a maara nke ọma n'ime oge. Enyere ya aha Lias, Dogger, na Malm. N'oge Jurassic oke osimiri nwere ọtụtụ obere mgbanwe mana naanị n'oge ime. Ugbua na elu Jurassic, enwere ike ịhụ oscillations ụfọdụ ngwa ngwa n'oge nke dugara na ịrị elu nke oke osimiri, na-akpata idei mmiri nke nnukwu mpaghara na North America na Europe.
N'oge a, anyị nwere ike igosi mpaghara mpaghara biogeographic abụọ dị na ihe anyị maara taa dịka Europe. A maara otu dị ka Tethys na ndịda na boreal ọzọ n’ebe ugwu. A ga-amachibidoro mmiri coral niile n'akụkụ ka ukwuu na mpaghara Tethys. Mgbanwe dị n'etiti mpaghara abụọ ahụ dị na mpaghara Iberian Peninsula ugbu a.
Ihe ndekọ ala nke oge Jurassic dị ezigbo mma, ọkachasị na ọdịda anyanwụ Europe. Ọ bụkwa na n'akụkụ a nke kọntinent ahụ, e nwere usoro usoro mmiri dị ukwuu nke na-egosi oge mgbe akụkụ ka ukwuu nke kọntinent ahụ mikpuru n'okpuru oke osimiri na-enweghị omimi. N'ihi ama ama na mpaghara ndị a miri emi na-apụta, a maara ya dịka World Heritage nke Jurassic Coast na lagerstätten nke Holzmaden na Solnhofen.
Igwe ihu igwe Jurassic
N’oge a, ahịhịa ndị ebe ha na-ekpo ọkụ karịwooro bụ nke gbasara ala niile. Osisi ndị a nwere ike ịgbatị ihe ruru ogo 60. Osisi abụọ ahụ bụ nke otu ahịhịa ahịhịa nke dị na ndịda, na mgbago mgbago ugwu Siberia gụnyere ọtụtụ fern nke nwere ike iguzogide ntu oyi siri ike. Taa, ndị ikwu nke oge a nke fern a enweghị ike ịhazi ntu oyi na obere okpomọkụ ugboro ugboro.
Ihe niile nke a nke ịdị elu nke okpomọkụ mere ka ala nke Jurassic baa ụba na ahịhịa karịa nke Triassic. Karịsịa, enwere ọtụtụ ahịhịa n'ụba na latitudes dị elu. Ebe ọ bụ na ọ dị ezigbo ọkụ ma nwee ihu igwe dị jụụ ịgbatị ruo ọhịa niile, oke ọhịa na oke ọhịa ndị mebere ọtụtụ mbara ala bụ ihe nkiri Jurassic. Nke a bụ etu ọhịa si malite ịgbasa n'ụwa niile na ezinụlọ dị iche iche dịka conifers yiri pine na araucarias pụta, yana ụdị fern na nkwụ dị iche iche. N'ezie, ala ndị a niile jupụtara na ahịhịa ndụ ga-echeta ụfọdụ ihe nkiri Jurassic.
N'oge Jurassic, flora nwere ihe dị mkpa zuru ụwa ọnụ, ọkachasị n'ebe ugwu. Ọ bụghị naanị na oke ọhịa ndị jupụtara na conif na fern jupụtara, kamakwa ginkgos na ịnyịnya. N'oge a osisi ndị nwere inflorescences ka apụtaghị. Anyị na-echeta na, ruo ugbu a, osisi kachasị gbasaa n'ụwa niile so na otu mgbatị ahụ, ya bụ, ndị na - enweghị ifuru.
Nkesa nke uzo nke floral na mpaghara ala dum bu ezi ngosiputa nkewa nke di n'etiti ala ozo na ugwu. Mmepe nke ụdọ anụ dị iche site na ịdị adị nke ọtụtụ mgbochi mmiri nke dị n'etiti ugwu na ndịda. Ihe mgbochi mmiri ndị a na-etinye site na gradient okpomọkụ ka ukwuu nke si n'akụkụ kachasị nke osisi ahụ wee banye na Equator. Ndị ọkụ a na-ekpo ọkụ dị oke dị ka ha dị taa ma ọ bụ ezie na enweghị ihe akaebe nke ice polar n'oge Jurassic. Nke a pụtara na nkwupụta na ọnọdụ okpomọkụ dị elu ma bụrụkwa ihe kpatara mgbasa nke ụdị osisi a ka na-akwado.
Osisi dịpụrụ adịpụ site na Equator kwekọrọ na mpaghara mpaghara ọkụ na mpaghara Jurassic a kpọrọ aha Cycadophyta. Ginkgo na oke ohia abuo choro ile anya dum. Oge a ka dị ma osisi nwere ezigbo okooko osisi anọghị. Otú ahụ ka ọ dịkwa osisi hardwood.
Banyere ụmụ anụmanụ, dinosaurs gbasaa na ụwa niile n'oge a, ịbụ anụmanụ ndị na-achịkwa ụwa na oge oge ndị ọzọ.
Enwere m olileanya na site na ozi a ị nwere ike ịmụtakwu banyere Jurassic.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Meteorology » Ciencia » Oge Jurassic